एका बिहानै स्वच्छ मनले श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरि साउन १८गते आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटि स्वरुप शेयर गर्नुहोस – Khabar PatrikaNp
एका बिहानै स्वच्छ मनले श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरि साउन १८गते आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटि स्वरुप शेयर गर्नुहोस
August 2, 2020 590
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । भोगबिलासमा समय ब्य’तित हुनेछ । बोलिमा मधुरता छाउनेछ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको प्रारम्भ हुनेछ । बिश्वासिला ब्यत्तीहरुबाट धोका हुन सक्ने योग रहेकोछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) दम्पति बिच सामान्य मनमुटाब रहला । बाणी तथा स्वास्थ क्षेत्रमा ध्यान दिएको बेश हूनेछ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ । गरीरहेकोकार्यमा सामान्य त’नाव उत्पन्न हुनाले शारीरिक आलस्यताले सताउनेछ । समय त्यति राम्रो रहेकोछैन ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) खर्च नियन्त्रण गर्न गारो पर्न सक्ला । आफन्त जनहरु टाढिन सक्छन । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्रतिद्वन्धीहरुका कारण गरीरहेका कार्यमा सामान्य त’नाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) मित्र जनकोृ सहयोग बाट मन प्रशन्न रहला । बोलिको कारण साथि भाई टाढिन सक्छन । आय आम्दानिका क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ । मानसिक त’नावका कारण कार्य सम्पादनमा झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफुभन्दा सानाको सहयोगबाट कार्य सम्पादित रहनेछन । रचनात्मक कार्यबाट लाभ प्राप्त रहनेछ ।
तुला राशि र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ । यात्रामा सामान्य झ’न्जट आउन सक्छ । पराक्रम बृद्धि हुने छ । मान्यजनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्ला । नजिकका मित्रजनहरुबाट धोका मिल्ने सम्भाबना रहेकोछ । कार्यक्षेत्रमा सामान्य त’नाव उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) दाजुभाई बिच म’नमु’टाब रहन सक्ला । कामको क्षेत्रबाट सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । खानपानका क्षेत्रमा सावधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । स्वास्थमा समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य वा’दबि’वादको झमेलामा फस्ने सम्भाबना रहेकोछ । संचीत रकम समेत खर्चको योग रहेकोछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) खानपानका प्रभाबले घाटी सम्बन्धि सामान्य असर गर्नेछ । स्वास्थमा देखिएका समस्या बिस्तारै समाधान हुनेछन । कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा सावधानि साथै गो’प्यता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । जिवन साथिको सहयोगमा ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ ।
Prevसाउन १८ देखि २४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल ,यो साता कस्तो रहनेछ ?हेर्नुहोस्
Nextसिस्नो खानुका फाइदा के के हुन त ? जान्नुहोस !
बालकको ज्यान बचाउन गएका शिक्षकको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि आफ्नै ज्यान गुमेको छ
चर्चित अभिनेता अनुपविक्रम शाहीको आज जन्मदिन !